बेमौसममा बेच्न म्याग्दीमा सुन्तला भण्डारण - Kantipath.com
म्याग्दी – म्याग्दीका कृषकले बेमौसममा बेच्नका लागि सुन्तला भण्डारण गर्न थालेका छन् । घार–७ बिरौटा र हिस्तान–९ दोसल्लेका कृषकले अनुकूलित तापक्रमयुक्त भवन (सेलार स्टोर)मा सुन्तला भण्डारण गरेका हुन् । भण्डारण गरिएको सुन्तला बेमौसममा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने बिरौटा बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद बरुवालले बताए ।
बिरौटामा रहेको सेलार स्टोरमा यस वर्ष १५ कृषकले तीन हजार किलोग्राम सुन्तला भण्डारण गरेका छन् । पुसमा बोटबाट टिपेको सुन्तला चैत–वैशाखसम्म राख्न सकिने अध्यक्ष बरुवालले बताए । बेमौसममा प्रतिकिलो रु दुई सयका दरले सुन्तला बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
समूहका अनुसार ४५ घरधुरीको बसोबास रहेको दोसल्लेका कृषकले यस वर्ष रु २५ प्रतिकिलोका दरले करिब रु २० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बिरौटाको भवन बनाउन रु पाँच लाख र दोसल्लेमा रु चार लाख ४४ हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
कृषकले बिरौटाको भवनमा रु एक लाख ७५ हजार र दोसल्लेमा रु एक लाख ४८ हजार बराबरको श्रमदान गरेका थिए । सुन्तला भण्डारणको सुविधा भएपछि बगैँचा व्यवस्थापन, रोगकिरा नियन्त्रण र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने कृषि कार्यालयका प्राविधिक सहायक श्यामराज क्षेत्रीले बताए।
Previous Previous post: मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना : निर्माणमा ढिलाइ
Next Next post: “कहिले होला तिम्रो बनि” म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
पत्रकार महासंघ दोलखाद्वारा पत्रकार कल्याणकारी काेष संचालन
नेपाललाई कोरोनाविरुद्ध लड्न चीनले थप ९ करोडको सामग्री सहयोग गर्ने
काठमाडौंमा इन्धनको हाहाकार किन भयो ?
बृहत्तर धान विस्तार योजनाअन्तर्गत चैते धान खेती सुरु
सहकारी संस्थाको आफ्नै लगानीमा चिया प्रशोधन कारखाना !
स्लेट खानीको उत्खनन र बिक्री व्यवस्थित नहुदा कर नतिरेर करोडौँको स्लेट निर्यात
श्री एयरलायन्सले थप एक उडान शुरु
आजको विनिमय दर :जेष्ठ-३०-२०७६
What about the impact of COVID-19? : Nabin Kumar Mahato
जसपाका ४ प्रदेश सांसदको सर्वोच्चद्वारा पुनर्वहाली
देवदर्शन मिडिया ग्रुपद्वारा चन्द्रागिरिमा रहेका पत्रकारहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या ३ लाख ४५ हजार ५२३
चिनियाँ सिनोभ्याक खोप इन्डोनेशियामा निकै प्रभावकारी
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि डाक्टर र स्वास्थ्य सामग्रीसहित गोरखा पुगे नारायणकाजी
असल छिमेकी टोलमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
इजरायल–गाजा युद्ध जारी : एक हप्तामा ३ हजार रकेट प्रहार